Musharrax Jebiye oo $10,000 ugu deeqay Sheybaarka Jaamacadda Boosaaso
November 16, 2018 (Boosaaso) – Musharraxa xilka Madaxwaynaha Puntland ee doorashada sannadka 2019, Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye, ayaa lacag dhan $10,000 (toban kun oo doollar) ugu deeqay Jaamacadda Boosaaso, xarunteeda dhexe ee magaalada Boosaaso.
Musharrax Jebiye wuxuu deeqdan ugu talo galay inay qayb ka noqoto kharashaadka ku baxaya dhismaha shaybaarka sayniska ee Jaamacadda Boosaaso, kaddib markii maamulka Jaamacaddu usoo gudbiyeen baahiyo dhowr ah oo jaamacaddu qabto, kana codsadeen in uu hirgelintooda gacan ka geysto.
Injineer Maxamuud Khaliif wuxuu dhinaca kale kulan xog waraysi ah la qaatay ardayda wax ka barta kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Boosaaso, isagoo warbixin kooban ka siiyey qorshihiisa siyaasadeed iyo mabaad’ida uu dalka ku hoggaamin doono haddii loo doorto xilka Madaxwaynaha Puntland.
Musharraxu wuxuu dhallinyarada u ballan qaaday in haddii xilka Madaxwaynaha Puntland loo doorto uu shaqo abuur u samayn doono da’yarta reer Puntland.
Wuxuu sidoo kale ballan qaaday in uu dadaal dheeri ah gelin doono tayeynta waxbarashada, maadaama dhallinyaradu qayb muhiim ah ka yihiin bulshada waajibna ay tahay in mustaqbalkooda xil weyn layska saaro.
Musharrax Jebiye wuxuu deeqdan ugu talo galay inay qayb ka noqoto kharashaadka ku baxaya dhismaha saybaarka sayniska ee Jaamacadda Boosaaso, kaddib markii maamulka Jaamacaddu usoo gudbiyeen baahiyo dhowr ah oo jaamacaddu qabto, kana codsadeen in uu hirgelintooda gacan ka geysto.